~ ဏီလင်းညို ~: အောင်ပွဲအတွက်...အသင့်...
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 8:10 AM
သာမီး အန်တီညိုရေ။ သူများကိုလဲ စိတ်ပူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲစိတ်ပူ။
ဘကျောက်ကတော့ ဘာမထီ စတိုင်လ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေတာနော်။ ယုံကြည်လိုက်ပါ ဆရာဝန်တွေ ခန့်မှန်းချက်လွဲတာလို့။ (ဖြစ်တတ်တာ အမှန်ပဲလေ)။ ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ ဆေးပညာခေတ်ကြီးမှာ မနက်ဖြန် အမြစ်ပြတ်ကုနိုင်တဲ့ဆေး မပေါ်ဘူးလို့ ဘယ်သူ တပ်အပ်ပြောနိုင်လို့လဲ။ ဘကျောက်အခုကုနေတဲ့ နည်းကလဲ အကောင်းဆုံးနည်းပဲလေ။
မာမီ သာမီးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပြောချင်ပါသေးတယ်..
မာမီရောဂါက တကယ်တော့ ဆရာဝန်တွေပြောသလောက်မဆိုးပါဘူး..
ရောဂါကိုဆေးသောက်ပြီးသေးအောင်လုပ်ပြီးခွဲလို့ရပါသေးတယ်..သူတို့က တယောက်ထဲသမားဆိုတော့ နေလဲအကြောင်းမထူး ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဓါတ်ကျပြီး သေအောင်ပြောကြတာ.. မာမီကို ဒီလိုလာစမ်းလို့ဘာရမလဲ..ဟင်း.
နောက် အနှစ် ၂၀ အေးအေးဆေးဆေး နေပြလိုက်မယ်..
သီချင်းလေး နားထောင်သွားတယ် ဏီလင်းရေ ...
ဘကျောက်အတွက် စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ဘကျောက် အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်လို့ ရင်ထဲမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ယုံကြည်နေတယ်။
ဏီလင်းလဲ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက် အနေ အစားဆင်ခြင်ပြီး ဆေးမှန်မှန်သောက်အုံး။
ကိုကြီးကျောက်ဆိုပြီး ဘလောဂါမောင်နှမများ ဆုတောင်းပေးနေတာကို မြင်နေတာတော့ ကြာပါပြီ။ မလေးနဲ့ကိုကြီးကျောက်နဲ့ မသိပေမယ့် လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာ စာနာပြီး ခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကို ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့.. ကာယကံရှင်ကော မိသားစုတွက်ပါ.. ဒီနေရာကနေ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။
ဘကျောက်ကတော့ စံပဲ..အေးဆေးပဲတွေ့ လားး
ဘာမထီကျောက်... သက်တော်၁၀၀ထိရှည်မှာပါ ..
ဆရာဝန်တွေ လျှောက်ပြောနေတာ ..ယုံဘူးး
ကိုဏီးလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပါလေ..
ဏီလင်းညိုရေးထားတာရော.. ကိုကြီးကျော်ပြန်ရေးထားတာဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါ ရဲ့။
" ငပိသည်က အိပ်ပြီး ဆားသည်က ခွေးမောင်း" ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီနော်။
တကယ်ပဲ ဦးလေးကြီးကို လေးစားတယ်
သူကတော့ အေးဆေးပဲ ...
ကိုကြီးကျောက် အတွက် အမှတ်တရ လေး ဖတ်သွားတယ် ကိုကြီးကျောက် ကြီး နေကောင်းတော့မှာ သိလား စိတ်မပူ နဲ့ အသက်၂ဝဝဝ ကျောက်တဲ့
မသေချင်သေးတဲ့စိတ်ရယ်၊ ငါမသေဘူးလို့ ယုံကြည်နေတဲ့စိတ်ရယ်က ကိုကြီးကျောက်ကို အောင်ပွဲ ရစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်..
ခုလေသံနဲ့ဆို ကိုကြီးကျောက်က နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ များစွာ စာရေးနေနိုင်ဦးမှာပါ
ဘကျောက်ကိုတော့ မချီးကျူးပဲနဲ့ကို မနေနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်...
ဆေးမှန်မှန်သောက်ပြီး ပျော်အောင်နေရင် အနှစ်(၂၀)လောက်တော့ အေးဆေးပါ..။
ရင်ထဲမှာ လေးလေးနက်နက်တွေးတတ်တာ နတ်သမီးရဲ့အကျင့်တခုပါ၊ မိဘ(၂)ပါး ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီးကတည်းက
ဆရာဝန်ရဲ့ “မရတော့ဘူး” “လုပ်စရာရှိတာလုပ်ထားတော့”..
ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကို ကြားရင် အတိတ်ကို ပြန်သတိရတယ်၊ စိတ်တွေထိန်းမရအောင်ဖြစ်ရတယ်၊ ကြေကွဲရတယ်...။
အဲဒါကြောင့် အဲဒီလိုစကားလုံးမျိုးတွေကြားရင် မိဘနဲ့ထပ်တူ အရမ်းခံစားရတယ်။ )
ငါတို့ အကိုကြီးရဲ့ စိတ်ဓါတ်မာကျောမှုအတွက် ငါတို့ ဂုဏ်ယူရမယ် မဟုတ်လား။ ဒါဟာ လူတိုင်းလက်စွဲထားမယ့် ဘဝ နေနည်းလည်း ဖြစ်တယ်။
ထုတ်မပြောဖြစ်ပေမယ့် စိတ်မကောင်းခြင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းမှုက ထပ်တူပါပဲ။
လာလည်သွားတယ် သာမီးရေ... ကိုကြီးကျောက်ကိုတော့ တကယ်ကိုလေးစားမိပါတယ်
တိုတိုကျောက်ရေ အာဂျား အာဂျား ဖိုက်တင်းးး
ကိုကြီးကျောက်လို စိတ်မျိုးကတော့ သြောချလောက်တယ်..။
သူ့လိုစိတ်မျိုး ကိုယ်တွေအလှည့်ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်..။
မြသွေးနီလည်း အလုပ်ပိနေလို့ အခုမှရောက်နိုင်တော့တယ်။
လျှော့သောက် သာမီးရေ...။ လျှော့သောက်..။
ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ တကယ်လေးစားတယ်။
ကိုယ်တွေ သူ့နေရာမှာ ဒီလိုစိတ်ထားနိုင်ဖို့ လွယ်မယ်မထင်ဘူး..။
သေမင်းကိုသရော်.. စိတ်ကိုပျော်ပျော်ထားနိုင်တာလေးစားတယ်။ အဟုတ်။ ကိုဏီရော..မူးသေးလား..? မိတ်ဆွေအားလုံးကို နေကောင်းကျန်းမာစွာနဲ့ စာတွေရေးတာ.. ကွန်မန့်တွေပေးတာ.. အိမ်တွေလည်နေတာ မြင်တွေ့နေချင်ပါတယ်ရှင်..။
အင်း..သေခြင်းတရားနော် ..ကိုယ်ဆိုရင်ကော အေးဆေးစွာ တည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်နိူင်ပါ့မလား..မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့....